Fahalalahana Miteny: Lasibatra Laharam-pahamehana Amin’ny Ady Ataon’i Erdogan Amin’ny ‘Fanjakàna Anjorony’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Desambra 2014 3:50 GMT
Vakio amin'ny teny English, čeština , Nederlands, Español, English
Tamin'ny Desambra 2013, an'arvony ireo nanao hetsi-panoherana nanohitra ny kolikoly sy ny governemantan'i Erdogan tao Istanbul. Lamba be iray nisy ny sarin'i Fethullah Gulen sy ny PM Erdogan mivaky hoe “tsy misy tsara izy roa.” Fulya Atalay ho an'ny Demotix, sary laharana faha- 3553279.
Nanodidina an'io fotoana io, tamin'ny taona lasa, nifoha tamin'ny tantara ratsy momba ny fanadihadiana heloka bevava mahavoarohivohy ny fianakaviana sy ireo mpiara-miasa akaiky tamin'i Recep Tayyip Erdogan, praiminisitra tamin'izany fotoana izany, tamin'ny tantara ratsy goavan'ny kolikoly teo amin'ny tantaran'ny firenena i Tiorkia. Raha tokony hoe nametra-pialàna, dia naleon'i Erdogan nanome toky fa hiady amin'ireo mpifanandrina ara-politika nolazainy fa manodinkodina ny fanadihadiana.
Ary dia nataony tokoa moa ny ady, amin'ny fomba tsy refesi-mandidy azy manokana
Nihazakazaka hatramin'ny herinandro faran'ny 2014, ary dia filoha i Erdogan ankehitriny, matanjaka kokoa noho ny taloha, mankalaza onjam-pisamborana izay nahataitra ny mpitazana avy ao anatiny sy any ivelan'ny firenena. Ireo mpanao gazety mpanohitra sy heverina ho mpanohana ara-politika an'i Muhammed Fethullah Gulen, mpiara-dia teo aloha fa lasa fahavalo ary monina any Etazonia ankehtriny, no lasibatry ny fisamborana. Gulen — mpanankarena malàla-tànana, mpampianatra ary imam fahiny, izay namelona aingam-panahy ho an'ny Hetsika Hizmet, dia zara raha resahana any anatin'ireo fampahalalam-baovao iraisampirenena ary tsy mba nolazaina ho mpitokatoka-monina – fa nahasarika mpankafy manerana izao tontolo izao. Ireny mpankafy ireny dia nahitàna polisy, mpitsara ary manampahefana hafa avy amin'ny governemanta ao Tiorkia.
Hatramin'ny nipoahan'ilay tantara ratsy momba ny kolikoly, natodik'i Erdogan ho any amin'i Gulen ny basy, izay tànany ho tomponandraikitra manokana amin'ireo volana maromaro nanahirana azy nandritry ny fitondràny ara-politika. Io vanim-potoana io dia nanomboka tamin'ny nisamborana ireo zanaka minisitra tao amin'ny kabinetrany tamin'ny Desambra 2013 ary tonga tamin'ny fara-tampony tamin'ny famoahana tety anaty aterineto ny rakipeo iray izay ny feon'ny lehilahy tao anatiny dia toa an'i Erdogan sy ny zanany lahy, Bilal, tamin'ny Febroary tamin'ìity taona ity. Tao anatin'ilay rakipeo, voalaza ho tamin'ny andro nisamborana ireo minisitra, dia resak'ireo lehilahy roa ny fomba hanafenana volabe tsy hita noanoa (heverina fa azo tamin'ny fomba tsy ara-dalàna) satria ny fanadihadiana iray nataon'ny polisy (heverina ho mpomba an'i Gulen) dia mamatotra an'i Erdogan sy ny antokony “Fahamarinana sy Fampandrosoana” (AKP).
Efa fantatra fa Erdogan dia mino hoe asatànan'ireo mpanaraka tsy misy fepetra an'i Gulen ilay fanadihadiana hiadiana amin'ny kolikoly, ireo fisamborana tamin'ny 14 Des nikendrena ireo mpiasan'ny fampahalalam-baovao eritreretiny ho mpanara-dia an'ilay mpanabe dia mamofompofona valifaty efa nokotrehina ela.
Toy ny efa nandefa lakolosy fanairana tamin'ny fomba ofisialy mikasika izay hitranga i Erdogan rehefa niteny hoe :
Tsy tambajotra iray tsotra fotsiny no atrehantsika fa iray izay hetsehin'ny herin'ny maizina avy eto anatiny sy ivelan'ny firenena. Na iza na iza no ao anatin'izy ireny ary ao ambadik'izy ireny dia hoarodantsika io tambajotra io, ary asaintsika mizaka ny nataony/andraikiny.
Tao anatin'ny zava-nitranga, olona 31 — mpanao gazety sy manamboninahitry ny polisy tondroina ho manana fifandraisana amin'i Gulen — no voasambotra. Isan'ireny i Nedim Dumanli, tonian'ny famoahana ao amin'ny gazety “Zaman”, Hidayet Karaca, talen'ny Samanyolu TV ary Ali Kara, mpanoratra ilay andian-tantàra fandefa amin'ny fahitalavitra miteraka resabe ao Tiorkia, “One Turkey- na Tiorkia Tokana”. Ireo rehetra ireo dia samy nampangaina ho mitarika sy mamatsy ary mpikambana anaty fikambanana mpampihorohoro mitam-piadiana avokoa.
Araka ny lazain'ny “Human Rights Watch” (Mpanaramaso ny Zon'Olombelona), tafiditra ao anaty lasitra iray ahitàna ny fiampangana amin'ny resaka fampihorohoroana sy ny tsikombakomba ireo fisamborana ireo, mba hamelezana ireo mpanao gaety mpanohitra. Emma Sinclair-Webb, fikambanan'ireo Zokiolona Mpikaroka Ao Tiorkia dia nanoratra tamin'ny 15 Des hoe :
Ezaka fandemena sy fanaratsiana ireo mpanao gazety Gülenist (mpankasitraka an'i Gulen) ny fisamborana mpanao gazety manodidina ny fotoam-pahatsiarovana ny tsingerintaonan'ny ady amin'ny kolikoly… Mifanaraka tsara amin'ny lasitra efa mahazatra amin'ny fanenjehana mpanao gazety lazaina fa mpikambana anaty fikambanana tsy ara-dalàna ireny fisamborana ireny mba hampanginana ireo fampahalalam-baovao be tsikera.
Voalaza ho nanomboka naharikivy ny fifandraisana teo amin'ireto lehilahy roa ireto nandritry ny taona 2012, saingy vao mainka nirefotra toy ny vanja nilevina izany ny 13 Nov rehefa nanomboka nanakatona ireo toeram-pampianaran'i Gulen teo aloha tao Tiorkia i Erdogan. Hatramin'ny niharatsian'ny fifandraisan'i Gulen tamin'i Erdogan, dia mora be ho an'ireo mpanara-dia an'i Erdogan ny mamantatra izay tena fahavalom-pirenena marina.
Tany ampiandohan'ity lohataona ity, nialoha ny fandreseny tamin'ny fifidianana izay ho filoha tamin'ny Aogositra, noroahan'i Erdogan ireo manamboninahitra anjatony tao amin'ny polisy sy ireo mpampanoa lalàna, nohararaotiny tsara ny fotoana nisian'ny fiahiahiana kolikoly nanjo ny AKP. Raha toa ka efa afaka daholo ny vesatra rehetra nanjo ireo naman'i Erdogan, dia tahàka ny hiraikitra ihany kosa ireny vesatra vaovao ireny — ho an'ny fahavalony.
Ny 14 Okt, nohelohin'ny Fiombonambe Eoropeana (EU) izay nantenain'i Tiorkia hidirana ho mpikambana ireny fisamborana ireny. Federica Mogherini, lehiben'ny Politika Ivelany sy ny Kaomisionan'ny Fanitàrana ao amin'ny EU, ary i Johannes Hahn dia namoaka fanambaràna iraisana izay mivaky toy izao:
Ireo bemidina nataon'ny polisy sy ireo fisamborana mpanao gazety maro ary solontenanà fampahalalam-baovao tao Tiorkia androany dia tsy mifanaraka amin'ny fahalalahan'ny asan'ny fampahalalam-baovao, izay fototra iorenan'ny demaokrasia.
Saingy mijanona ho teny fotsiny azo ahilika ery an-joron-trano ery ny fanamelohana natao amin'ny anaran'ny demaokrasia, raha mamy dia mamy kosa ny valifaty politika.
Manjary kianja iadiana ara-politika ny rindrankira ao Tiorka
Fahasalamàna 26 Marsa 2022